यी राशिले आफ्नै राशिमा भेट्छन् सच्चा प्रेम ! – Butwal Sandesh
यी राशिले आफ्नै राशिमा भेट्छन् सच्चा प्रेम !
प्रेम सम्बन्धको विषयमा धेरैलाई कौतुहलता साथै चासो रहने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रमा कुन-कुन राशि बिचको सम्बन्ध राम्रो हुने भन्ने बारमे राम्रै बर्णन गरिएको पाइन सकिन्छ। आफ्नै राशिसंगको प्रेम सम्बन्ध कुन-कुन राशिको लागि शुभ मिन्ने गरिन्छ भन्ने बारे आज यस लेखबाट चर्चा हुनेछ। हेर्नुहोस् :
यस राशि हुने व्यक्तिको सिंह राशिसँगनै रहेको प्रेम सम्बन्ध धेरै प्रगाड हुने गर्छ। एक अर्काको आदर्श मिल्ने हुँदा पनि सम्बन्ध सफल हुनमा मद्दत मिल्न सक्छ। यदि जोडी एक अर्का प्रति धेरैअनि अर्पित हुने गर्छन् भने हरेक समर्पण गर्न तत्पर हुने हुँदा सम्बन्धमा खासै नराम्रो पल नआउने गर्छ। सिंह राशि हुनेहरुको सिंह राशि हुनेहरुसँगको जोडी धेरै राम्रो रहने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस राशि हुनेहरुले पनि तुला राशि हुनेहरुसँग प्रेम सम्बन्ध अगाडी बढाएको खण्डमा धेरै राम्रो रहन सक्छ। सम्बन्धमा दुवै तर्फबाट ईमानदारी साथै समर्पण रहने हुँदा सम्बन्ध धेरै राम्रो रहन सक्छ। तुला राशि भएका व्यक्तिहरु हरेक प्रकारको त्‍याग गर्न पछि नहट्ने भएको कारण आफ्नै राशि भएका व्यक्तिसंगको सम्बन्ध राम्रो रहन सक्छ। साथै सजिलै गल्तिको महसुस मात्र नभई भूलको माफी पनि एस्सजिलै दिन सक्ने क्षमत भएको कारण तुला राशि-तुला राशिको सम्बन्ध राम्रो रहने गर्छ।
यस राशि भएका व्यक्तिहरु हरेक प्रकारको भावनामा बग्ने हुँदा। आफ्नै राशि भएका व्यक्तिले भावना बुझ्ने सम्भावना उच्च रहने गर्छ। सानो-सानो कुरामा पनि खुसि रहने सक्ने क्षमता भएका कारण वृष-वृष राशि बिचको सम्बन्ध प्रगाढ रहने गर्छ। वृष राशि भएका व्यक्तिहरुको धेरै सोच्ने बानि हुने गर्छ। जसका कारण यी दुई बिचको सोच पनि मिल्न जाने हुँदा सम्बन्धमा खासै अफ्ठ्यारो परिस्थिति नाउने हुन्छ।